Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ်အမျိုးအစား ရွေးပါအထွေထွေစက်မှု၊ လက်မှု ကျွမ်းကျင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်လုပ်သားများစားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်းငွေကြေးနှင့်စာရင်းကိုင်စားသောက်ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုအထွေထွေလုပ်သား၊လုံခြုံရေးကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် အလုပ်အမျိုးအစား ရွေးပါ
အထွေထွေစက်မှု၊ လက်မှု ကျွမ်းကျင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်လုပ်သားများ (65)
ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်း (37)
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ (87)
စက်ရုံနှင့် အထည်ချုပ် (27)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပျူတာ 19
လက်ဝတ်ရတနာနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာလုပ်ငန်း 16
ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 16
အလုပ် 609 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
Floor Area Attendant
အိမ်သန့်ရှင်းရေး | Housekeeper
Aurora Business Tower
အခန်းများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ချက်ချင်းပင် HouseKeeping ရုံးသို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ အကြောင်းကြားခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဧည့်ခန်းသန့်ရှင်းရေများပြုလုပ်ရမည်း။ ဧည့်သည်အကြိုက်များကို အချိန်တိုင်းစံသတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာ၊ စားစရာ များကို ပုံမှန်စာရင်းကောက်ယူရမည်။
တင်သောနေ့: 30 Jun 2022
Housekeeping Staff (PA,RA, Laundry)
Thein Than Yadanar Co.,Ltd
- PA/RA/ Laundry ပိုင်းများအား အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - Housekeeping ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် Chemical အသုံးပြုခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိရမည်။ − Shift ဖြင့် အလှည့်ကျတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: - နေစားစရိတ်ငြိမ်း
တင်သောနေ့: 09 Jun 2022
Customer Service ( Thaketa)
ဧည့်ကြိုကောင်တာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဌာန | Reservations
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ဆိုင်ခန်းရှင်များနှင့်ဝယ်သူများအား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို ဖန်တီး၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း။ Management မှချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းများကိုထိရောက်စွာ အဆင်ပြေမှုရှိ/ မရှိစစ်ဆေးခြင်း။ Capital Mall အတွက်လိုအပ်သော ဆိုင်ဌားနှင့်ပတ်သက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ သတင်းအချက်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်း။ လိုအပ်လျှင်စာရွက်စာတမ်းများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်စီမံရေးရာဝန်ထမ်းနှင့်တွဲဖက် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။ အဝင်ဖုန်းများ လက်ခံပြောဆိုပြီး Complaint များကို စီမံ၍ စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း။ Mall Management နှင့်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များကြားတွင်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းပေးရန်။ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များကိုယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံရန်နှင့် ပြုပြင်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ကောင်းမွန်စွာရှင်းပြပေးရန်။ Mall Management ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသိရှိနားလည်ရန်။
Titan Cleaning and Hygiene Service
သန့်ရှင်းမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် နေရာထိုင်ခင်းများတာဝန်ယူရမည်။ Customer များ၏ တောင်းဆိုချက်များကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်ရမည််။ Hotel သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်များကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ရမည်။ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများကို ပုံမှန်ရယူပြီး လိုအပ်သလို စတော့ကို အော်ဒါခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်၍ အထက်မှပေးအပ်သော တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ အသင်းအဖွဲနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
တင်သောနေ့: 29 Jun 2022
အဝတ်လျှော်သမား | Laundry
ဧည့်သည်အဝတ်လျှော်နှင့် အခန်းတွင်းပိတ်ချောများ စုဆောင်းပေးပို့ခြင်းအတွက် တာဝန်များလုပ်ဆောင်ရမည်။ အဝတ်လျှော်ခြင်းဘေလ်အားလုံးကို အမှားအယွင်းမရှိ တွက်ချက်ပြီး အခန်းနံပါတ်အပါအဝင် မှန်မှန်ကန်ကန်တင်ပြမှုများလုပ်ဆောင်ရမည်။ အဝတ်လျှော်ဘောက်ချာ မှတ်တမ်း မှန်ကန်ကြောင်း ဧည့်သည် ပစ္စည်းများ အားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့ တင်ပြရမည်။ အဝတ်မျာ' ကောင်းစွာခွဲခြင်း၊ လျှော်ခြင်း၊ မီးပူတိုက်ခြင်း၊ ခေါက်ခြင်းနှင့် ဧည့်ခံအ၀တ်လျှော်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်။ ပိတ်စနှင့် ဧည့်သည်များ၏ အဝတ်လျှော်မှု အစီရင်ခံစာကို အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ် တိကျသောစာရင်းကို ထားရှိရမည်။ လိုအပ်ပါက ဧည့်သည်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်စွာ ဆက်ဆံရမည်။ အဝတ်လျှော်ခန်းသို့ မပေးပို့မီ ပျက်စီးမှုရှိ/မရှိးကို စစ်ဆေးရမည်။တစ်စုံတစ်ရာ ပျက်စီးပါက ပြုပြင်၍မရပါက ဧည့်သည်နှင့် မန်နေဂျာထံ အကြောင်းကြားရမည်။ ပစ္စည်းအားလုံးကို နှစ်ခါစစ်ဆေးပြီး အခန်းနံပါတ်နှင့် ထွက်ခွာမည့်ရက်ကို သင်မပို့ဆောင်မီ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်စစ်ဆေးရမည်။ တစ်နေ့တာအတွက် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာပါရမည်။
တင်သောနေ့: 20 Jun 2022
သန့်ရှင်းမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် နေရာထိုင်ခင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးတွင် တာဝန်ယူရမည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ စံနှုန်းပြည့်မီစေရန် စစ်ဆေးခြင်း၊ Customer များ၏ တောင်းဆိုချက်များကို အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်နည်းကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည််။ လိုအပ်သလို ဝန်ထမ်းအပြောင်းအရွှေ့များ စီစဉ်ပေးခြင်းနှင့် အစားထိုးစီစဉ်ပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ ညံ့ဖျင်းသော အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ ဝန်ထမ်းတွေကို သင်တန်းတွေ ပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများကို ပုံမှန်ရယူပြီး လိုအပ်သလို စတော့ကို အော်ဒါခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
တင်သောနေ့: 13 Jun 2022
Hotels/ Resturant တွင်Cleaning Services ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်၍ အထက်မှပေးအပ်သော တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ အသင်းအဖွဲနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
တင်သောနေ့: 08 Jun 2022
Golden City Business Management Co.,Ltd
- Hotels/ Cleaning Services ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ - ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ဖျတ်လတ်၍ အထက်မှပေးအပ်သော တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
အကျိုးအမြတ်: အခြေခံလစာ + စားစရိတ် + အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ခရီးစရိတ်။
တင်သောနေ့: 23 May 2022
Esperado Lake View Hotel (Yangon)
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ရှိသော အချိန်ပြည့် Housekeeping (သို့မဟုတ် အိမ်သန့်ရှင်းရေး) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အလိုရှိသည်။
တင်သောနေ့: 19 May 2022
စားသောက်ဆိုင် မန်နေဂျာ | Restaurant Manager
စားသောက်ဆိုင်၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် တာဝန်ယူရမည်။ စားသောက်ဆိုင်အရောင်းအဆင့်များနှင့် အမြတ်အစွန်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး စီစဉ်ရမည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကို စုစည်းရမည်။။ ပရိုမိုးရှင်းပွဲများနှင့် လျှော့စျေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့သော ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်များလုပ်ဆောင်ရမည်။ ဝန်ထမ်းထိန်းချုပ်မှု၊ အစားအသောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အရောင်းအ၀ယ်အပါအဝင် အဆိုင်း/အပတ်၏အဆုံးတွင် အစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်ရမည်။ ဘတ်ဂျက်များသတ်မှတ်ပါ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား Managementဖြင့်agreementရအောင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ မီနူးများကို စီစဉ်ပြီး ညှိနှိုင်းရမည်။ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း စားသောက်ဆိုင်၏လည်ပတ်မှုကို ညှိနှိုင်းရမည်။ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း များလုပ်ဆောင်ရမည်။ Customerများ၏မေးမြန်းချက်များနှင့် complainများကို ဖြေရှင်းရမည်။ Customerများနှင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခြင်း၊ စားပွဲကြိုတင်မှာယူမှုများကို စီစဉ်ပြီး အကြံဉာဏ်များ ပေးရမည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ မြင့်မားသောစံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းရမည်။
တင်သောနေ့: 28 Jun 2022
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်သူ | Machine Operator
Oku San No Marketing Co., Ltd
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပြုပြင်ခြင်း နှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။ စက်ပစ္စည်းများချို့ယွင်းမှူ ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးအတည်ပြုရမည်။ လိုအပ်သောပစ္စည်းများ မှတ်တမ်းတင် ထားရှိရမည်။ မိမိအထက်လူကြီးနှင့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ နယ်ထွက်ရမည်။
အလုပ်အမျိုးအစား: အထွေထွေစက်မှု၊ လက်မှု ကျွမ်းကျင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်လုပ်သားများ
Staff For Library Solution Department ( Mandalay )
စာကြည့်တိုက်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်သို့ မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ ကုမ္ပဏီမှ ပေးဆောင်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အစီရင်ခံစာများကို ပြင်ဆင်ရမည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းသစ်များကို မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသော customer များနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ Management မှလွှဲအပ်ထားသည့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။ ဒေသအတွင်း စာကြည့်တိုက်သုံးကိရိယာများ လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရန် နည်းလမ်းသစ်များကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရမည်။ တက်ကြွသော အရောင်းနည်းစနစ်များကို အသုံးချပြီး အရောင်းပိုမိုတိုးတက်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည်။
အချက်အပြုတ် ကောင်းမွန်စွာ စီမံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ တစ်ပတ်စာ Menu များအား စီစဉ်ပေးနိုင်ရမည်။ အရည်အသွေးမြင့် ဟင်းလျာများ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရမည်။ မီနူးများ သေချာစွာစီစဥ◌် ရမည်။ မိမိဝန်ထမ်းများကို ပြန်လည် သင်ကြားပြသပေးရမည်။ မီးဖိုချောင်ကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရမည်။ အစားအသောက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု နှင့် တကိုယ်ရေးသန့်ရှင်းမှုကို ဉီးစားပေးရမည်။
တင်သောနေ့: 15 Jun 2022
Medical Representative ( Bago Region)
Royal Care Plus Co.,Ltd.
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်း . ရန်ကုန်တိုင်း .
Medical Representative ( Bago Region) (သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူ) ရာထူး2နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ စသည်တို့ကိုစိတ်ဝင်းစာရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအစီအစဥ်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ထိုဒေသအတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ရမည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များအား ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပက်သက်၍ မေးမြန်းချက်များကိုဖြေကြားပေးခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
တင်သောနေ့: 14 Jun 2022
Recruiter active 19 hours ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Medical Representative ( Monywa Region)
Medical Representative ( Monywa Region) (သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူ) ရာထူး2နေရာစာအတွက် အထူးအခွင့်အရေး၊ ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ စသည်တို့ကိုစိတ်ဝင်းစာရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများနှင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်များနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုအစီအစဥ်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ထိုဒေသအတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ရမည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များအား ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပက်သက်၍ မေးမြန်းချက်များကိုဖြေကြားပေးခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပြုလုပ်ရမည်။
အဖျော်ယမကာဖျော်စပ်သူ | Bartender, Mixologist
Inventory များစာရင်းပြုစု စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ Waiter, Waitress များအား Trainning ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။ Shisha လုပ်တက်သူဖြစ်ရမည်။ Bar management နိုင်နင်းရမည်။ Customer Complain များအားစနစ်တကျကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အချိန်ပြည့် Telesales Assistant (သို့မဟုတ် ဆိုင်အရောင်းစာရေး) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အလိုရှိသည်။ - ကုမ္ပဏီများ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူရန် သုံးစွဲသူများအား ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရမည်။ - Electronic ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
Chugoku-TOA Paints Myanmar
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရမည်။ ဝယ်ယူသူများထံမှ တိုင်ကြားချက်များနှင့် မေးမြန်းချက်များကို ဖြေဆိုရမည်။ ပရောဂျက်အသစ်များကို ရှာဖွေရမည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကို ပံ့ပိုးကူညီရမည်။ ပရောဂျက်နေရာများနှင့် သင်္ဘောကျင်းများသို့ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ အရောင်းနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ အချက်အလက်များတင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုအပ်ပါက ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
Territory Sales Executive ( Taungoo, Malwlamyine)
Seagram Myanmar Company Limited
တောင်ငူ၊ မော်လမြိုင်၊ မြိတ်၊ မြစ်ကြီးနားတွင် Territory Sales Executive ရာထူးအတွက် အလိုရှိသည်။ သတ်မှတ်ထားသော နယ်မြေအတွင်း ရှိပြီးသားနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Customer များအား ဆက်သွယ်ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ အလားအလာရှိသော နယ်မြေအတွင်း စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ရမည်။ ဒေသတွင်း အရောင်းရလာဒ်များ (အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်)ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အလားအလာရှိသော customer များအား တင်ပြရမည်။ Customer လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများကို အကြံပြုခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက် အရောင်းခွဲတမ်းများ ပြည့်မီစေရန် အရောင်းဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားအဖွဲ့များနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းများလုပ်ဆောင်ရမည်။ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ စျေးနှုန်းနှင့် အပိုဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း Customerမေးခွန်းများကို သေချာ ပြန်လည်ဖြေကြားရမည်။ အလျဉ်းသင့်ရင် ကုန်ပစ္စည်းကို ဖြတ်ရောင်းပါ။ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို မျှဝေရန်နှင့် ပေါင်းစပ်ရောင်းချမှုနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် မတူညီသော နယ်မြေများမှ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
တင်သောနေ့: 16 Jun 2022
KSS Group of Companies
သာကေတ | ရန်ကုန်တိုင်း . ရန်ကုန်တိုင်း .
ချစ်တီးထမင်းချက်ပြုတ်ရမည်။ ချစ်တီးထမင်း၊ဟင်းသာမက မြန်မာထမင်းပါကောင်းစွာ ချက်ပြုတ်တတ်ရမည်။ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းစွာ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း အစားအသောက်များပြီးစီးအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်။ မီနူးများ စီစဉ် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်ရမည်။ မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို ဦးစားပေးသူဖြစ်ရမည်။
တင်သောနေ့: 10 Jun 2022
Ghani Win Int'l Ltd.
ရေလုပ်ငန်း နှင့်အအေးခန်း (Marine &Cold Store ) လုပ်ငန်းပိုင်းလုပ်ကိုင်ရမည်။ ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်ကို ပိုင်းခြားပြီး စာရင်းရှင်းတမ်းများ ပြင်ဆင်ရမည်။ ဘတ်ဂျက်ပြင်ဆင်ရန်မိမိ၏အထက်လူကြီးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါရမည်။ ငွေသား၊ ချက်လက်မှတ်နှင့် ခရက်ဒစ်ကတ် အရောင်းအ၀ယ်များ၊ စာရင်းဇယားများနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများကို ရေးသွင်းခြင်းတို့ကို တိကျစွာလုပ်ဆောင်ရမည်။ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအတွက် လက်ခံထားသော စာရင်းအင်းအခြေခံမူများ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်စာရင်းစစ်များနှင့် အထွေထွေစာရင်းပြုစုပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရမည်။ ဝင်ငွေခွန်ပြန်ကြားလွှာများနှင့် ကော်ပိုရိတ်အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ရမည်။ ငွေသားစီးဆင်းမှု၊ အမြတ်နှင့် အရှုံးရှင်းတမ်းများနှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများပါ၀င်သော လစဉ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို ပြုစုတင်ပြရမည်။
Recruiter active2days ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
အခန်းအလှပြင်ဆင်ရေး | Interior Design
Thorium Interior Design, Decoration & Construction
- ဒီဇိုင်းသဘောတရားများနှင့် အကြံပြုချက်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။ - တိကျသေချာသော ပရောဂျက်စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း။ - Presentation ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း။ - ပရောဂျက်ဆိုဒ်များနှင့် ရောင်းချသူ အလုပ်ခန်းများသို့ လိုအပ်သလို ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ - သုတေသနပြုပြီး အမြတ်ဆိုင်ရာ တင်ပြချက်များကို အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။ - Specification ရေးသားခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး/ဒီဇိုင်းများကို အကြံပြုဆောင်ရွက်ရမည်။ - ရောင်းချသူနှင့် Customerဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရမည်။
QC/ QS Engineer
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ | Engineer (Civil)
Project တိုးတက်မှုသည်သက်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရမည်။ လိုအပ်သလိုလိုက်လံဆောင်ရွက်ကာ Quality အရည်အသွေးပြည့်မီမှုရှိမရှိ ပမဏအား စစ်ဆေးသူဖြစ်ရမည်။ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အပြောင်းအလဲများရှိလျှင် ထိန်းညှိခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ အခြားသော Plan များကိုပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်း၊ ပေးထားသော Budget အတွင်း Technical ဆိုင်ရာ ပြသာနာများကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
Loan Officer (Nay Pyi Taw)
Inno Capital Microfinance Co.,Ltd.
နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အချိန်ပြည့် Loan Officer (Nay Pyi Taw) (သို့မဟုတ် ချေးငွေတာဝန်ခံ) ရာထူး 1 နေရာစာအတွက် အလိုရှိသည်။
လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု | Security Services
ဧည့်သည်ဝင်ထွက် စာရင်း မှတ်တမ်းများအား စစ်​ဆေးရန်။ ​အလုပ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မသင်္ကာစရာများ ​တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်ဆင့်သို့ အ​ကြောင်းကြားအသိ​ပေး၍ ချက်ချင်းရှင်းလင်း​ဆောင်ရွက်ရန်။ အ​​ဆောက်အဦး အဝင်အဝနှင့် ​မော်​တော်ယာဥ် အဝင် အထွက် ဂိတ်ကြည့်ရှုစစ်​ဆေးရန် အတွက် တာဝန်ချထားချင်းများကို ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ​​ဆောင်ရွက်ရန်။ ​လုပ်ငန်း အတွင်း မသမာမှု့ တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်​ပေါ်​စေ​ရေးအတွက် အစဥ်အမြဲလှည့်လည်စစ်​ဆေးရန်။ လုံခြုံ​ရေးရုံးခန်းနှင့် ​ကျောင်းဝန်းအား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှု့ ရှိ​စေ​ရေးအတွက်လှည့်လည်စစ်​ဆေးရန်။ ပုံမှန်မဟုတ်ခဲ့​သော ဖြစ်စဥ်များ အတွက်လုံခြုံ​ရေး မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်တိကျ​သေချာစွာ မှတ်တမ်းထားရန်။
တင်သောနေ့: 24 May 2022
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 11KV လိုင်း၊ Transformer တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ကိုင်ရမည်။ Telecom Grid Power ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ Telecom နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
တင်သောနေ့: 01 Jul 2022
လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် | Technician (Electrical)
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်Fiber တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည်။ Fiber စနစ်များကို စမ်းသပ်ပြီး အမှားအယွင်းများကို ရှာဖွေပြီး ပြုပြင်မည်။ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ကိရိယာများကို တည်ဆောက်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမည်။ Customer များနှင့် တိုက်ရိုက်ကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမည်။ အလုပ်တစ်ခုစီ၏ အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရမည်။ Customer အိမ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များတွင် အလုပ်လုပ်ရမည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေတိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့်Fiber တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည်။ Fiber Optic ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဒေတာကွန်ရက်များကို တည်ဆောက်ရမည်။ အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ထပ် ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ကေဘယ်ကြိုးများတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ကိုင်ရမည်။ စနစ်များကို စမ်းသပ်ပြီး အမှားအယွင်းများကို ရှာဖွေပြီး ပြုပြင်ရမည်။ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ကိရိယာများကို တည်ဆောက်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးရမည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 11KV လိုင်း၊ Transformer တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ကိုင်ရမည်။ Telecom Grid Power ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ ဘက်ထရီ၊ rectifier နှင့် Telecom ပါဝါစနစ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတနှင့် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ Telecom နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။
ဥယျာဉ်မှူး | Gardener
စီမံခန့်ခွဲရေးအမိန့်ကို လိုက်နာရမည်။ မြက်ခင်းများနှင့် အခြားစိမ်းလန်းသောနေရာများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမည်။ ရှုခင်းများနှင့် ရာသီအလိုက် ပန်းဒီဇိုင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ အပင်များသန်စွမ်းမှုကို စောင့်ကြည့်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမည်။ English Version Must obey as par management order. Maintaining lawns and other green spaces Installing landscapes and seasonal flower designs Monitoring and ensuring plant health
တင်သောနေ့: 24 Jun 2022
Copyright © 2022 ALOTE.com.mm